Kulan looga hadlay cidda ka dambeysa dilka hal-doorka Soomaaliyeed oo Minneapolis Convention Center(SAWIRRO) – Abuubakar.org
Sabtidii 18, 2013 Kulan aad u ballaaran oo loogu magac daray YAA KA DANBEEYA DILKA HAL-DOORKA SOOMALIYEED ayaa lagu qabtay Minneapolis Convention Center kasoo ay qabanqaabiyeen qaar ka mid ah masaajiddada gobalka Minnesota iyo soomaalida ku nool Minneapolis iyo Stpual agagaarkooda.
Kulankan oo ay ka hadleen culummaa’udiin ,aqoonyahano & odayaal dhaqameedyo ayaa waxaa aad looga hadlay dhibta ummadda ayku hayso dilka soo noqnoqanaya ee lagu hayo culummada, ardayda & waxgaradka soomaaliyeed oo uu ugu danbeeyay dilkii Sheikh Abdikadir Nur Farah.
Waxaa aad looga dooday dilka ama gaaleysiinta soo if-baxday tan & markii dhawr sano ka hor la maqlay magaca Al-shabaab, waxaa si baaxad leh looga hadlay halka ay diintu dhigtay badbaadinta nafta ,oo ay culumadu isku wada raaceen in diinteenu tahay mid nabadeed oo loo baahan yahay in si caqli leh loo fahmo .
Waxaa si cilmiyeysan looga hadlay billowgii ama soo if-baxii firqooyinka ku salaysan diinta oo la sheegay in firqooyinku yihiin dhib jirta oo loo baaahan yahay in xalinteeda loo adeegsado in la fahmo kidaabka Alle ”Ninna firqo uu ka tirsan yahay janno ku galayn waa in cid walbaa ay cabsidda alle janno ugu doonataa” ayuu yiri Sheikh c/risaq Xaashi oo ah imamaka masjidka Abuubakar ee magaaladda MPLS.
Waxaa aad looga faallooday soo if-baxii koox diineedka Al-shabaab dhibka ay ummada ku hayso oo isagu jira ,dilka, khilaafka culummada ,jir-dilka loogaysto dadka qaarkiis oo ay ka jareen xubnahooda.
Eng Cabdi Saleebaan oo ka hadlay dhibta dhalinyarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in waalidiintu fahmaan ilmahooda in ay ka fakaraan ilmahooda halka ay genayaan hadday noqoto School ama dugsiyada. Wuxuu uga digay waalidiinta inay waqtigooda & maalkooda u huraan ilmahooda ,isagoo u tusaaleeyay silsiladda taxan ee ilmaha 2 jirka ilaa 18 jirka ah oouu tusay dadkii kulanka kasoo qayb galay in ilmaha dhaqanka aad laba jirka kula dhaqanto uu la gaarayo 17 jirka. ”Cunuga 2 jirkiisa wuxuu u ooyo oo loo daayo 17 jirkiisa kama dhaadhicin kartid Al-shabaab ka har”.
Qodobadii Laga Hadlay Waxaa Ka Mid Ahaa:
Asalka Firqooyinka waxaa si cilmiysan u qeexay Sh C/Risaaq Sancaani
Taariikhdii Al Shabaab Waxaa Faaleeyay Sh Abuu Fadli
Shanta Ugu Muhiimsan Nolosha Waxaa Sal Dhigay Caalimka Wayn Sh.Axmed Taajir
Xadgudubka Diinta Waxaa Iftiimiyay Sh Xasan Jaamici
Doorka Culumadda Waxaa Dadka U Sharaxay Sh C/Risaq Xaashi
Nabada Sida Islaamku U Qiimeeyay Ayaa Waxaa Soo Jeediyay Sh .C/Qani Qardaawi
Dr.Mohamed oo ka mida Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa kala hadlay dadkii goobta ku Sugnaa cudurrada dhaqa maskaxda & qaadashada fahamka qaldan
Gabababadii ayaa goobta laga soo saaray bayaan waxaana halkaa ka aqriyay Maamulaha Masjidka Abuubkar Mpls Mohamud Guled (Suhayb), qodobadii ugu waa waynaa ee bayaankana waxaa ka mid ahaa:
1 In la saxo inxiraafka diiniga ah oo la saaweeyn iyadoo la raacayo asluubta shareeecada.
2 Waxay ururka Al shabaab loogu baaqay in uu ka waantoobo qaladaadka ay dhex dabaalanayaan, dibna ugu soo laabtaan manhajka saxda ah.
3 In la taageero shirka ay ku baaqeen culummada ee Garowe kaddib dilkii Sh. C/qadir Nuur Faarah uuna ku baaqay Sh. Bashiir Salaad
4 in kooxda Al-Shabab ay yihiin koox ka leexatay wadadii nabigeena SCW iyo manhajkii Salafu Saalix
5 Waxaan u soo Jeedinaynaa Dawlada federalka ee soomaaliyeed iyo maamulgobalada in ay qaataan kaalintooda oga beegan ka hortaga ururka al Shabab dhibka iyo xasuuqa ay ku hayaan umada soomaaliyeed